ဟာသအချို့ | ကျွန်မ၏ခံစားမှုများ သီကုံးရာ လွတ်လပ်ခြင်းအနုပညာ
December 27, 2007, 8:25 am Filed under: Jokes လွန်ခဲ့တဲ့လလောက်က ကျွန်မ email ထဲမှာ လက်ခံရရှိလိုက်တဲ့ သဘောကျမိသော ဟာသလေးအချို့ပါ ။ အမှန်တရားနဲ့ဟာသကို ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ ဒီဟာသလေးအချို့ကို နှစ်သစ်ကိုကူးပြောင်းတော့မယ့် ဒီရက်ပိုင်းမှာ အားလုံးကို ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်။ ဆီလျော်အောင် အနည်းငယ်စာလုံးအချို့ကို ကျွန်မပြန်စိစစ်ပြီး စာပြန် ရိုက်ပေးထားတာပါ။ အားလုံးနှစ်သစ်မှာ ကံကောင်းပျော်ရွှင်ကြပါစေရှင်။
`မောင်ဂါးဖီး ငရဲပြည်မှာလည်း လူ့ပြည်မှာလိုပဲ နိုင်ငံပိုင်နက်တွေခွဲပြီး ပြစ်မှုစီရင်တယ်။ ပြစ်မှုစီရင်ပုံ တွေကတော့ အတူတူပဲ။ မင်းကိုငါကခင်လေတော့ မင်းဘယ်နိုင်ငံသွားလေ့လာချင်လဲပြော’
`ဖြစ်တော့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ငါမမှီတော့ဘူးတဲ့´ …. ။
December 19, 2008 @ 8:52 am Reply	RSS feed for comments on this post.	TrackBack URI